Sidee lagu ogaadaa in ilmuhu xumaado | Bezzia
Sida loo ogaado haddii ilmuhu xumaado
Maria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Carruurta wax baro
Ma jiro waalid jecel inuu qirto in ilmahoodu xumaaday oo uusan helin waxbarashadii saxda ahayd. Si kastaba ha noqotee, habdhaqanka noocan ah ayaa aad uga badan inta aad moodeyso waana iftiinka maalinta.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la awoodo in wax laga qabto dhibaatadan waqtigeeda maadaama haddii kale ay waxyeello u geysan karto marka ay gaarto qaangaarnimada. Waalidiintu waa inay lahaadaan aaladaha lagama maarmaanka u ah si ay u awoodaan inay saxaan dabeecadaha noocaas ah ee wax u dhimaya carruurta kana horjoogsanayaan carruurtooda inay xumaadaan.
1 Sida loo ogaado haddii ilmuhu xumaado
2 Sida loo saxo akhlaaqda cunug xumaaday
Waxaa jira calaamado dhowr ah oo muujinaya in ilmuhu xumaaday iyo in dhaqankeedu uusan sax ahayn:
Ilmuhu inuu ka xanaaqo wax walba oo uu yeesho xanaaq waa caadi ilaa 3 ama 4 sano jir. Haddii da'daas wixii ka dambeeya, cunuggu sii wado xanaaqa, waxay ku tusin kartaa inuu yahay ilmo xumaaday. Da'da noocan oo kale ah, xanaaqa iyo xanaaqa ayaa loo adeegsadaa si waalidiinta loogu maareeyo loona helo waxa ay doonayaan.
Cunugga xumaaday ma qiimeeyo waxa uu haysto oo hammiyo xilli kasta. Ma jiraan wax qanciya ama ku qanciya mana awoodo inuu jawaab ka qaato.
Waxbarasho la’aan iyo qiyam la’aan ayaa ah astaamo kale oo muujinaya in ilmuhu xumaado. Wuxuu kuwa kale ula hadlayaa si gebi ahaanba ixtiraam la'aan ah iyo quudhsasho buuxda.
Haddii ilmuhu xumaado, waa wax iska caadi ah inuu diido amar kasta oo ka yimaada waalidka. Ma awoodo inuu aqbalo sharciyada lagu dejiyay guriga wuxuuna sameeyaa wuxuu doonayo.
Sida loo saxo akhlaaqda cunug xumaaday
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inay waalidku sameeyaan waa inay aqbalaan in ilmahoodu xumaaday iyo in waxbarashadii ay heleen aysan ku filnayn. Halkan laga bilaabo waxaa muhiim ah in la saxo habdhaqanka noocan oo kale ah oo la raaco tilmaamo taxane ah oo ka caawinaya ilmaha inuu helo dabeecad habboon
Waxaa muhiim ah in la adkeeyo wajiga xeerarka la soo rogay oo aan la siinin ilmaha.
Kan yar waa inuu lahaadaa xilal taxane ah oo ay tahay in la guto. Waalidiintu ma caawin karaan isaga kan yarna wuxuu ku leeyahay midka fuliya.
Wadahadalka iyo wada xiriirka wanaagsan ayaa fure u ah ixtiraamka dadka waaweyn. Dhibaatada carruurta haysata maanta ayaa ah inay si dhib leh ula hadlaan waalidkood, keenaya dhaqan aan habboonayn.
Waalidiintu waa inay tusaale u noqdaan carruurtooda iyo ay lahaan doonaan habdhaqan ku habboon hortooda.
Way fiicantahay in loo hanbalyeeyo ilmaha markuu wax saxo iyo in si fiican ay tahay. Xoojinta dabeecadaha noocaas ah waxay ka caawin doontaa cunuga inuu awood u yeesho inuu ixtiraamo xeerarka kala duwan ee waalidku dejiyeen.
Gaaban, Waxbarista cunuggu maahan hawl fudud ama fudud waxayna u baahan tahay waqti iyo dulqaad badan. Marka ugu horeysa way ku adkaan kartaa cunuga inuu fahmo sharciyada noocan oo kale ah laakiin wuxuu aakhirka si adag u baran doonaa taxane qiyamyo ah oo ka caawin doona inuu dabeecaddiisa ka dhigo midka ugu habboon uguna habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Carruurta wax baro » Sida loo ogaado haddii ilmuhu xumaado
5 buug oo ku saabsan nolosha waarta ee ay tahay inaad aqriso
Cuntooyinkani waxay saameeyaan wareegga dhiiggaaga